एउटा श्रीमतीले आफ्नो श्रीमान संग राती कोठामा के चाहन्छिन ? जान्नुस – Hamro Nepali Samachar
Home/ समाचार/एउटा श्रीमतीले आफ्नो श्रीमान संग राती कोठामा के चाहन्छिन ? जान्नुस
श्रीमान् श्रीमतीबाट के चाहान्छन् – नमस्कार साथीहरु, आजको पोष्ट विवाहित जोडीहरुका लागि एकदम महत्त्वपूर्ण छ किनकि आज हामी तपाईलाई बताउँछौ कि श्रीमतीले आफ्नो पतिबाट के चाहन्छ र उसको चाहना के हो। आफ्नो विवाहित जीवन सुधार गर्न, हरेक पतिले आफ्नी पत्नीको सबै चाहना र इच्छालाई पूरा गर्नुपर्दछ।
हामी तपाईंलाई यो पोस्ट एकदम ध्यानपूर्वक र पूर्ण रूपमा पढ्न अनुरोध गर्दछौं ताकि पत्नीको हृदयमा रहेको सबै कुरा जान्न सकियोस्। धेरै समय साथीहरू बिना नै आजको पोष्ट सुरु गरौं। प्रशस्त माया कुनै पनि पत्नीलाई आफ्नो पतिबाट सबैभन्दा बढी चाहिने कुरा भनेको प्रेम र स्नेह हो।
यदि श्रीमती खुशी छ भने, हरेक पतिले आफ्नी पत्नीलाई पूरा प्रेम गर्नुपर्छ। पति र पत्नीको सम्बन्धमा प्रेम हुनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। र यदि त्यहाँ प्रेम छैन भने, तब त्यहाँ जीवनको कारलाई अगाडि बढ्नमा धेरै समस्या र समस्या छ। प्रेम कुनै पनि सम्बन्ध बलियो र मजबूत बनाउँछ। प्रेम जीवनको अन्तिम सत्य हो, यदि प्रेम नै छैन भने सम्बन्ध बिग्रिन थाल्छ।
आदर गर्ने पतिले सधैं आफ्नी पत्नीको आदर र सम्मान गर्नुपर्छ। केटीलाई सम्मान गर्नु एकदम राम्रो चीज हो र यदि उनले कुनै केटीलाई सम्मान गर्दिन भने उनीलाई धेरै नराम्रो लाग्छ।
पतिले आफ्नी पत्नीलाई कहिल्यै बेइज्जत गर्नु हुँदैन किनभने यसले उसलाई धेरै चोट पुर्‍याउँछ। श्रीमान् र श्रीमतीको बीचमा सँधै आदर र सम्मान हुनुपर्दछ र यो एक अर्कासँग बाँच्ने सही तरिका हो।
आफ्नो सबै गर्व र जोश पूरा गर्न पतिको जिम्मेवारी हो। हरेक विवाहित महिलाको हृदयमा धेरै इच्छा हुन्छ। हामी भन्न सक्दैनौं कि संसारमा सबै कुरा श्रीमतीले आवश्यक छ, तर उनीहरूलाई आवश्यक चीजहरू दिन धेरै महत्त्वपूर्ण छ।